I-Stonecastle Ranch Retreat - I-Airbnb
I-Stonecastle Ranch Retreat
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguBill & Deb
UBill & Deb yi-Superhost
LE NGINGQI IFUNA INDLU YETHU ye-MIM. UKUHLALA KWEENTSUKU eziyi-29 Iindwendwe zethu ziza konwabela ixesha elizolileyo, elipholileyo nelipholileyo eStonecastle Ranch Retreat. Sinikezela nge-sauna yaseFinland kunye ne-jacuzzi ukunceda ingqondo yakho kunye nomzimba wakho uphole. Olu hlobo lwexesha lokuphumla ngoxa uhleli apha kwi-The Ranch luza kunceda ekwenzeni ubomi bakho bemihla ngemihla bube mnandi ngakumbi. I-Lake Tahoe "I-Jewel of the Sierra 's" ikumgama wemizuzu eyi-30 kuphela kunye nokutyibilika ekhephini, ukuhamba ngephenyane, ukunyuka intaba ngebhayisekile, ukuloba, kunye nokuzonwabisa ngeklasi yehlabathi.
Sifuna ukuba iindwendwe zethu zizinike ixesha lokuphumla zize zivuselele apha eStonecastle ukuze sizame ukwenza loo nto yenzeke, ngokukunika Indawo Yokuphola Yabucala.
Xa ubhukisha kuthi akukho mali yongezelelekileyo yokucoca okanye etsalwayo yalo naluphi na uhlobo.
Uza kuhlala kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex kodwa esecaleni kwendlu. Inefenitshala epheleleyo, ibe yindawo yakho yobuqu.
Inikezelwe yi-Wifi yomsebenzi wakho we-laptop kunye neRoku Smart TV. Kukho i-DVD player, kunye nemidlalo yebhodi engachananga. Indawo yomsebenzi ikulindile kwigumbi lokuhlala. Ikhitshi lilungiselelwe nantoni na osenokuyidinga ukuze upheke. Kukho ikofu, iiti ezahlukahlukeneyo, kunye neziqholo eziqhelekileyo zokukuqalisa. Igumbi lokulala linebhedi enkulu, kunye nendawo yokubeka iimpahla, kunye neengubo ezimbini ukuze kubekho indawo eyongezelelekileyo. Sinengubo ye-spa ukuze ungasokoli. Uza kufumana ne-ayini kunye nebhodi yokuayinela. Kwigumbi lokuhlamba uza kufumana izinto ezingekho ntle. Izinto zokuthambisa, ukuba kukho into oyilibeleyo okanye uphelelwe ngoxa ulapha. Ibhafu ineshawa enomhlaba onobuhlobo be-Bio-bidet ekwikomishini.
Kumanyathelo ambalwa ukusuka kumnyango wakho wangaphambili, sikhona ukuze uphumle wedwa, ibhafu enamanzi ashushu kunye nesauna yaseFinlandia. Kukho ibhayisekile emileyo, i-elliptical, i-TV, iimagazini kunye nezinye iincwadi kwisakhiwo sokuzilolonga kunye netafile yokuphulula izihlunu. Sine- # ye-musseuse yeselfowuni yasekuhlaleni kodwa ngenxa yeCovid 19 ngeli xesha iimaskhi zethu azihambi.
Eyona njongo yethu kukuba izinto onokuzonwabela "Kwisiqwenga Sethu Esincinci Sasezulwini" zibe zintle kwaye zingalibaleki!
Ifama ikwiihektare eziyi-3, kwindawo esezilalini. Sineentlambo eziyi-360% ezijikeleze iLake Tahoe entle. Le ndawo ivulekileyo ingakunika ezona ndawo zintle zokuthamela ilanga nokutshona kwelanga ukuze zikukhumbuze. Kukho iivenkile zokutyela ezininzi ezintle kwindawo yaseMinden, eGardnerville, naseCarson City. I-Custom Dragger kwisikhululo seenqwelo-moya i-Minden isoloko imnandi ukutya isidlo sakusasa okanye isidlo sasemini e-, kwaye iGeneral Store ekoneni ine-pizza entle njl. onokuyioda uze uyithathe. I-Starbucks ikwimida yedolophu engena kwi-Minden.
Ukuba ufuna ukuthenga ukutya, uza kuqhuba nje imizuzu eyi-10 ukuya eGardnerville okanye eCarson City. Zombini ezi dolophu zineWalmart kwaye uza kufumana iCostco, iTrader Joes, kunye neIn & Out Burger kwiHwy 395 eya kwiSixeko saseCarson.
I-Gardnerville inematrasi yokuhlamba impahla elawulwa kakuhle necocekileyo ukuze uhlambe impahla yakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Bill & Deb
Sithathe umhlala-phantsi kwiikhasino eziseLake ngoko sisekhaya ixesha elininzi. Iflethi okanye indlu ekwicomplex oza kuhlala kuyo idityaniswe nekhaya lethu kodwa yeyakho. Siyakuthanda ukuncokola nokwabelana ngolwazi lwethu ngale ndawo xa sibuzwa kodwa ukuba ufuna izinto zakho eziyimfihlo siyayiqonda kwaye siyayihlonipha. Mhlawumbi uza kusibona siphuma sinyamekela size sonwabele izilwanyana zethu okanye senze ezinye zefama yethu. Ungoyiki ukuthi Molo mandla apha kwifama ephangaleleyo.
Sithathe umhlala-phantsi kwiikhasino eziseLake ngoko sisekhaya ixesha elininzi. Iflethi okanye indlu ekwicomplex oza kuhlala kuyo idityaniswe nekhaya lethu kodwa yeyakho. Siyakut…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Minden